Coronavirus Manomboka miparitaka eto Antananarivo
Nisy olona 10 vaovao voan’ny covid-19, izay manome ny isa ho 82. Ny amin’ireo 3 no tonga tamin’ny zotram-piaramanidina avy any ivelany Frantsa sy Maorisy.
Ny 7 kosa dia “cas contact” na vokatry ny fifampikasohana tamin’ireo olona mitondra ny Covid-19. Ny 5 tamin’ireo dia nifanerasera tamin’ireo efa voa.
Tsy fantatra hoe taiza sy taiza avy
Ny 2 dia tsy dia mazava loatra hoe nifampikasoka tamin’ny olona avy any ampita sa Malagasy efa voa teto, raha ny fanazavan’ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle. Tena manahirana sy mampiahiahy io satria raha halalinina, dia tsy fantatra mazava izany izay olona mety namindra tamin’izy ireo, izay mety miriaria any sy efa manaparitaka amina olona maro hafa.
Antananarivo, Toliara, Nosy Be
Tamina toerana 3 samihafa eto Madagasikara no nahitana azy 7 ireo, 2 tany Toliara, 1 tany Nosy Be Hell Ville ary io dia nisy soritr’aretina satria sempotra saingy tsy atahorana ny ainy. Ny 4 ambiny kosa dia teto Antananarivo, ka teny Alasora, Ankadifotsy, Ampitatafika sy Isotry no nahitana azy ireo; faritra anisan’ireo tena be olona mifamezivezy ireo. Midika izany fa manomboka ahitana ity valan’aretina ity ny tanàna maro, indrindra fa ny eto Antananarivo Renivohitra sy ireo kaominina manodidina, ankoatra ny any amin’ny Faritra samihafa, izay efa saika ahitana. Raha somary vitsivitsy tao anatin’ny andro vitsy, dia mihazakazaka ny isa raha 10 tao anatin’ny iray andro, ary ahiana ho maro be ny efa voa mbola nmiparitaka any. Hatreto, dia 82 izany ireo tratry ny coronavirus teto Madagasikara, ka ny 2 tamin’ireo no efa sitrana, ary ny 80 no mbola manaraka fitsaboana sy arahi-maso akaiky any amin’ny hopitaly. Marina fa misy ny sitrana, fa tsy maintsy mitohy ary mafimafy kokoa ny fisorohana. Iny mivoaka ny trano iny no mety hifindran’ilay aretina. . Ny ankamaroan’ireo marary dia tsy misy soritr’aretina na dia misy ihany aza ny manavy sy mikoha-maina. Ny 63 amin’ireo 80 no tsy misy soritr’aretina toy ny olona salama tsara. Tsy fantatra mazava ny olona mety efa voa eny amin’ny fiarahamonina. Tsy voatery hisy soritr’aretina ny olona voa, ka ny fanafodiny dia ny tsy mivoaka ny trano satria mety efa mihelohelo eny ny aretina, mety efa maro ny mitondra azy.